गाउ फर्कनेहरु भन्छन- काठमाण्डौ मा मर्नु भन्दा गाउमै म’र्छौ ! – Khabarhouse
गाउ फर्कनेहरु भन्छन- काठमाण्डौ मा मर्नु भन्दा गाउमै म’र्छौ !
Khabar house | ११ बैशाख २०७७, बिहीबार १५:१४ | Comments
काठमाडौं । को;रोना भाइरस (को’भिड–१९) संक्रमणप्रति सतर्कता अपनाउनमा मुलुकमा लक डाउन गरिएको एक महिना पूरा भएको छ । सरकारले शुरुमा लकडाउन कार्यान्वयनमा निकै क’डाई गरेको थियो । लकडाउन कार्यान्वयन गर्न शहरका चोकचोक र गल्लीगल्लीमा सु’रक्षाकर्मी तै’नाथ छन् । लक डाउन पालना गराउन खटिएका सुरक्षाकर्मीले बासिन्दालाई अत्यावश्यक काम बाहेक घरबाहिर ननिस्कन आ’व्हान गरिरहेका छन् ।
आम नागरिकलाई घर बाहिर ननिस्कन आग्रह गरिए पनि केही दिन यता भने बासिन्दाले त्यसलाई उ’ल्लंघन गर्न थालेका छन् । काठमाडौंमा विभिन्न पेशामा रहेका उपत्यका बाहिरएका बासिन्दा केही दिनयता लक डाउन उ’ल्लंघन गर्दै बाहिरन थालेका छन। यसरी बाहिरिनेमा मजदुर, विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरतहरु छन् । आफ्नो गृहस्थान फर्कन चाहेर पनि लकडाउनको कारण काठमाडौंमा अड्काहरुलाई गन्तव्यमा पुर्याउन सम्बन्धित स्थानीय तह र विभिन्न संघसंस्थामा बसको व्यवस्था गर्न थालेका छन् ।
काठमाडौंको कोटेश्वर, जडिबुटी, पेप्सीकोला, बालाजु, कलंकी र बल्खु लगायतका ठाउँमा हरेक दिन बेलुकी बस तयारी अवस्थामा राख्न थालिएको छ ।ती ठाउँमा आ आफ्नो गन्तव्यमा जानेहको लर्को नै लाग्ने गरेको छ । काठमान्डौ छोड्नेहरु काठमाण्डौमा बस्नको लागी निकै असहज भएकोले गाउ फर्किएको बताउछन। उनीहरु भन्छन -काठमाण्डौमा आफुहरुको खाद्यान पैसा सकिएकोले गाउ जान लागेका हौ, अहिले स्थानीय तहले गाडीको ब्यबस्था गरेकोले काठमाण्डौमा भोक भोकै म’र्नु भन्दा गाउमै गएर मर्छौ । भिडियो यहाँ लिंकमा छ ।